Akukaze Kubonwe Amanani ku-Amazon kuze kube nguNovemba 12 | Izindaba zamagajethi
Ekupheleni kwalenyanga kugujwa uLwesihlanu olumnyama obelulindelwe, okungenye yemicimbi ebhekwe ngabomvu kwabaningi bethu futhi esivumela ukuthi songe imali enkulu sibhekene nezipho zikaKhisimusi, inqobo nje uma sazi ukuthi singakuthola kanjani okunikezwayo okuhle kakhulu futhi senze ukulandelwa kwangaphambili.
Ngenkathi lolo suku lufika, abavela e-Amazon kule mpelasonto basinikeza iphromoshini entsha ebizwa ngokuthi ayikaze ibonwe, iphromoshini ebeka kithi imikhiqizo ehlukahlukene yazo zonke izinhlobo, hhayi i-elektroniki kuphela ngamanani entengo athokozisayo. Lapha sikukhombisa amadili amahle kakhulu esingawathola ku-Angikaze ibonwe e-Amazon.
I-Amazon isivumela ukuthi sikhokhele ukuthenga ngezitolimende ezi-4 zanyanga zonke, okuzosivumela ukuthi sithenge imali eningi futhi sikwazi ukuyikhokha kahle kwizitolimende ezine zenyanga. Lolu hlobo lwezezimali luyatholakala ngamanani kusuka kuma-euro angama-75 kuya kwayi-1000 futhi kuncike ekuvunyelweni kweCofidis. Uma umkhiqizo utholakalela ukuxhaswa ngezimali, lokhu kuzoboniswa eceleni kwentengo yokugcina yomkhiqizo.
1 Amadili we-TD Systems TV
2.1 I-Xiaomi Mi9T Pro
2.3 Xiaomi Redmi Qaphela i-8
3 Amahedfoni we-Bluetooth azo zonke izikhwama
3.1 I-Enacfire E18 yama-euro ayi-23,54
3.2 I-HolyHigh yama-euro angu-13,76
Amadili we-TD Systems TV
I-TD Systems eqinile ingenye yezinkampani ezinikela ngemikhiqizo ehamba phambili kumathelevishini ku inani lemali. Yize kuliqiniso ukuthi i-Amazon inamamodeli amaningi esinawo, ngezansi sikukhombisa amamodeli anenani elihle kakhulu.
I-TV ye-HD engama-intshi angama-32 ngama-euro angama-109
I-TV ye-HD ephelele engama-intshi angama-40 ngama-euro ayi-159
I-TV engama-intshi angu-4 intshi engama-euro angama-50
I-TV engama-intshi angu-4 intshi engama-euro angama-55
Eminyakeni yakamuva, iXiaomi isibe inketho enhle kakhulu ongayicabangela lapho uvuselela amadivayisi wethu. Sekuyiminyaka embalwa ngokusemthethweni ibiseSpain ngokusebenzisa izitolo ezahlukahlukene ezisakazeke kuyo yonke inhlonhlo, okuyivumele ukuthi ibe ngenye yezinkampani ezithengisa ama-smartphones amaningi.
Ngalezi zinsuku, i-Amazon isinikeza okuhlukile kunokunikezwayo okuthakazelisayo uma sihlela ukuvuselela i-smartphone yethu futhi asifuni ukulinda iBlack Friday noma asikwazi ukulinda ngqo ngoba iyekile ukusebenza.
I-Xiaomi Mi9T Pro
El I-Xiaomi Mi 9T Pro I-terminal enconyelwe kakhulu, hhayi ngentengo yayo kuphela, kodwa futhi nangezinzuzo ezisinikeza zona nalapho i-6 GB ye-RAM ivelele khona, ihambisana ne-128 GB yesitoreji sangaphakathi. Isikrini sifinyelela kuma-intshi we-6,39 futhi yonke into iyisikrini, ngoba ikhamera yangaphambili itholakala engxenyeni engenhla yohlaka.
Ngaphakathi, sithola iQualcomm Snapdragon 855, ngakho-ke asisoze santula amandla okujabulela imidlalo yethu esiyithandayo. Ngemuva, sinamakhamera amathathu esingawathatha ngawo noma yisiphi isikhathi kunoma isiphi isimo.
Thenga iXiaomi Mi 9T Pro ngama-euro angama-359
Umehluko omkhulu i-Xiaomi Mi 9T esisinikeza wona uma iqhathaniswa nenguqulo ye-Pro, siwuthola ku-processor ephethe iqembu lonke, ngoba iyi-Snapdragon 730 esikhundleni se-Qualcomm's Snapdragon 855. Konke okunye ukucaciswa kuyafana nesingakuthola kuhlobo lwePro.
IXiaomi Mi 9T ngama-euro angama-295,20
Xiaomi Redmi Qaphela i-8
Kepha uma ungahlosile ukuchitha imali engaka, ngama-euro ayi-179,99 kuphela, ungathola iRedmi Note 8, isiphetho esihle sosuku nosuku. Ngaphakathi, sithola iQualcomm Snapdragon 644 ihambisana ne-4 GB ye-RAM kanye ne-128 GB yokugcina. Ibhethri lifinyelela ku-4.000 mAh futhi ngemuva sinohlelo lwekhamera le-4.
I-Xiaomi Redmi Qaphela i-8 ngama-euro angu-179,99
Amahedfoni we-Bluetooth azo zonke izikhwama
Njengoba iminyaka idlulile, abakhiqizi abaningi banqume ukuqeda ukuxhumana kwehedfoni, ngakho-ke kuya ngokuya kudingeka ukuba nehedisethi ye-bluetooth. Ngenhlanhla, intengo yalezi yehle kakhulu, ikakhulukazi phakathi kwemikhiqizo engaziwa kakhulu, kwesinye isikhathi isinikeza ikhwalithi engaphezu kokwamukelekayo.
Lapha sikukhombisa amamodeli amahle kakhulu atholakalayo kulezi zinsuku ngokuya ngenani lezibuyekezo abazitholile ku-Amazon.
I-Enacfire E18 yama-euro ayi-23,54
Ngezibuyekezo ezingaphezu kwezingu-2.587 XNUMX, Ayikho imikhiqizo etholakele. Banesilinganiso sezinkanyezi ezingaba ngu-4,5 kwezingu-5. Isinikeza uxhumano lwe-bluetooth 5.0, ukumelana ne-IPX 5 emanzini futhi siza namaphedi ama-3 ukuzivumelanisa nezindlebe ezahlukahlukene. Esinye sezici ezigqama kakhulu abasebenzisi abazithengile induduzo abayinikezayo.
Ngenxa yecala lokushaja, singazisebenzisa ngaphandle kokudlula kwishaja amahora angu-15 nabambalwa Amahora we-3,5 wokuzimela okumaphakathi ngokukhokhiswa ngakunye. Intengo yayo: 23,54 euros.
I-HolyHigh yama-euro angu-13,76
Uma izindlebe zezindlebe ziwela ezindlebeni zakho, ungasebenzisa amanye amamodeli angena endlebeni futhi atholakala e-Amazon ngama-euro angama-13,76 nje. Lawa mahedfoni asinikeza ukuzimela okufika emahoreni ayisishiyagalombili, anokuvikelwa kwe-IPX 8, ngakho-ke afanelekile kwezemidlalo futhi anezilinganiso ezijwayelekile zezinkanyezi ezingu-7 kwezingu-4,3 okungenzeka zibe nezilinganiso eziyi-5.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Amazon » Ungakaze Ubone Amanani ku-Amazon kuze kube nguNovemba 12
Yazi imiphumela Yokhetho Olujwayelekile lwaseSpain 10N 2019 kusuka ku-smartphone noma ithebhulethi yakho